Iindaba - Imakethi yePhepha lePhepha le-PVC: Intshayelelo
•Amashiti e-PVC amagwebu enziwe nge-polyvinyl chloride. Iimveliso zepetroleum, ii-resins, kunye neekhemikhali ezingaphiliyo zisetyenziselwa ukwenziwa kwala maphepha. Kwindawo elawulwayo, ulwelo olusebenzayo luyandiswa ukuvelisa amashiti e-foam e-PVC. Oku kuvelisa ukwahluka okwahlukeneyo koxinano lwegwebu.
•Izinto eziluncedo zamashiti e-foam e-PVC zibandakanya ukumelana nobushushu, ukumelana nomhlwa, ukumelana nomlilo, kulula ukubumba kunye nokupeyinta, kunye namandla aphezulu kunye nokuqina
•La maphepha e-foam alula, acinezelwe kwaye aqhagamshelwe ngokuqinileyo nge-laminates kunye neentsso. Ezi makhishithi zisetyenziselwa ukufakwa eludongeni, ngaphakathi okanye ngaphakathi kwangaphandle ukwenziwa kwefanitshala, izahlulelo, iibhodi zokubonisa, iibhodi zemiboniso, iziboniso ezivelayo, ii-hoardings, iifestile, iisilingi ezingezizo, kunye nomzi mveliso wokwakha.
•Amashiti e-foam e-PVC asetyenziswa njengenye indlela yokwenza amaphepha emithi ukwenza iingcango, ifanitshala, iibhodi zentengiso zangaphandle, iishelfu, njl njl. Ezi sheet ziyasetyenziswa ngakumbi kwizicelo ezahlukeneyo ngenxa yeempawu zazo zomzimba, ukufana, kunye nokuqaqamba okuphezulu kunye nokuqaqamba.
Ukunyuka kweMfuno yeeNdawo eziHlahlwayo kunye neeNdleko eziPhantsi zoKwakha ukuthengisa kwiMarike yePhepha lePovu lePVC
•Imakethi yentengiso ye-PVC yamaphepha ehlabathi iqhutywa kukonyuka kwemfuno zala maphepha kwizicelo ezahlukeneyo, kubandakanya ulwakhiwo, imoto kunye nokupakisha. Ikwabonelela ngobushushu obugqwesileyo kunye nokumelana nomlilo kunye neepropathi zokuthintela igesi, ezenza ukuba ibe yinto efanelekileyo yokusetyenziswa kwimoto, ibhasi, okanye uloliwe.
•Amashiti e-PVC amagwebu anokuthintela ukubola, ubungqina bokothuka, kwaye ayiyityhefu kubantu abanothintelo oluhle lomlilo, ubungqina bomsi, kunye neepropathi zokukhusela i-UV. Banikezela ukomelela okugqwesileyo kunye nokuqina, kwaye banemichiza ezinzileyo kunye neepropathi zokuntywila emanzini. Ke ngoko, amashiti e-foam e-PVC aqeshwe ngokubanzi kulwakhiwo nakwizinto zokwakha, ukuthuthwa, kunye nolwandle.
•Ukonyuka kwemfuno yexabiso lokwakha izinto kumazwe asakhasayo kunokwenzeka ukuba inyuse ibango lamaphepha e-foam e-PVC. Izinto zokwakha ezisekwe kwiphepha le-PVC zithatha indawo yezinye izinto eziqhelekileyo, ezinje ngomthi, ikhonkrithi, udongwe kunye nesinyithi.
•Ezi mveliso kulula ukuzifaka, ziyamelana nemozulu, zibiza kancinci, zilula, kwaye zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kunezinto eziqhelekileyo
•Ukunyuka kwemiqathango yokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwizakhiwo kukwacetyiswa ukonyusa ibango lamaphepha egwebu e-PVC ngeli xesha lokuqikelela. Ukongeza, ukwanda kwenani lezakhiwo ezizinzileyo kulindeleke ukuba kuqhube imarike yeglasi ye-PVC eAsia Pacific.
•Amaxabiso ezinto ezingafunekiyo ekrwada, ukwehla kwezoqoqosho, kunye nemigaqo engqongqo kurhulumente inokuchaphazela ukukhula kweemarike ze-PVC zomhlaba